Shuruudaha Abaalmarinta Gabayga Da'yarta sannadka 2018 ee BBC Soomaali - BBC News Somali
Laanta afka Soomaaliga ee BBC waxay raadinaysaa gabdha ugu gabay wanaagsan Soomaalida sannadka 2018ka, halkan ka akhriso shuruudaha.
1. Abaalmarintan waxey u furan tahay dhammaan dumarka ku hadla Afka Soomaaliga ee da'doodu u dhaxeyso 16 ilaa iyo 35 sano jir, (laga bilaabo 21-ka May ilaa iyo 15-ka Juunyo, 2018-ka).
4. Tartanka wuxuu furmayaa Isniin21 May saacada marka ay tahay 11 GMT. Dhammaan ka qeybgalayaasha waa inay soo diraan gabayadooda, foomka codsiga oo la buuxiyay, kaas oo laga heli karo barta BBC-da http://www.bbc.com/somali, amaba codsiga lagu hagaajiyaa emaylka-ka: tartanka.gabayga@bbc.co.uk.
Dhammaan codsiyadu waa in ay wehliyaan gabayga, iyo faah faahin ku saabsan: magaca, sannadka dhalashada iyo deegaanka aad ku sugan tahay.
5. Lama oggola in dalabka lagu soo gudbiyo qaab aan ahayn kan kor ku xisan
Xogta kale ee shaqsiga sida goobta uu joogo qofka looma gudbin doono cid kale oo aan BBC ahayn. Hadii aad doonaysid inaad ka laabatid ka qeybgalka abaalmarinta ama aad dooneysid in BBC-du tirtirito warbixintaada shakhsiga ah, fadlan la xiriir lynn.kariuki@bbc.co.uk. Faahfaahin dheeri ah ee ku saabsan hannaanka BBC-da ee ilaalinta xogta shakhsiga waxaad kaga bogan kartaa barta: bbc.co.uk/usingthebbc/privacy
6. Ka qeybgalayaasha waa inay codsiyadooda ugu dambeyn soo gudbiyaan saacaddu marka ay tahay 23:59 GMT maalinta Khamiista ah ee ay taariikhdu ku beegan tahay 15-ka June, 2018-ka.
Codsiyada lasoo gudbiyo wixii ka danbeeya waqtiga aan soo xusnay lama tixgelin doono. Codsiyada lama soo celin doono, sidaa darteed fadlan xusuusnow inaad la hartid nuqul kamid ah gabaygaaga.
12. Dadka guuleystay waxaa lasoo xiriiri doona ruux kamid ah hawl wadeenada barnaamijkan Abaalmarinta gabayada ee hablaha da'da yar ee laanta Af Soomaaliga ee BBC, ugu dambeyn Talaadada 11-ka Luulyo, 2018.
14. Dadka guuleystay abaal marintooda ayaa lagu wareejin doonaa, ama waxaa loo sii marin doonaa bangiga hadii yasan immaan karin xafladda lagu shaacin doono dadka guuleystay 18-ka July 2018.